Kurwiswa kweMagandanga eMuslim munzvimbo nhanhatu muVienna
Vazhinji vakafa uye vakakuvara vanonzi. Mumwe wemagandanga akapfurawo bhomba rekuzviuraya.
Muvhidhiyo iyi, mhondi inoonekwa ichipfura.
Kwete mazuva mazhinji apfuura, kurwiswa kunotyisa kwechiMuslim kwakaitika muchechi yeKaturike muNice .
MuAvignon, makiromita mazana maviri nemakumi mashanu kubva kuNice, murume wechiMuslim akapfurwa akafa mushure mekurwisa nebanga kumapurisa akati wandei.
Kurwiswa kweMagandanga eMuslim kuVienna
Nhasi, kwave nekumwe kurwisa kwechiMuslim kwemagandanga . Iye zvino muVienna munzvimbo nhanhatu. Vazhinji vakafa uye vakakuvara vanonzi.
Mupurisa akadzivirira sinagogi muguta akapfurwa uye ane kukuvara kunotyisa. Mutadzi mumwe anofanira kunge akafa uye mumwe anofanira kunge achitiza. Mumwe wemagandanga akapfurawo bhomba rekuzviuraya.
Kurwiswa kuri kuenderera mberi panguva yekunyora. Vanoverengeka vakafa. Vazhinji vakakuvara zvakaipisisa uye vazhinji vanowana kurapwa muchipatara .
Kurwiswa kunoonekwa sekurwiswa kwegandanga uye kunofungidzirwa kuti kwakaitwa nemhondi dzakawanda.
Jesu chete ndiye anogona kuponesa uye kununura
Pakarwiswa magandanga muNice neAvignon, ndakanyora kuti:
Vanhu vanonyatsoda Jesu Kristu wemubhaibheri. Ipapo pachave nekuguma kweruvengo, kuuraya uye chisimba. Jesu badzi ndiye anogona kuponesa uye nekuregerera uye nekuregerera zvivi zvevanhu!
Ini ndinotaura chirevo icho nhasi futi.
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 20:44